Yanolja Aqoonsiga Shirkadu - Joornaalka Naqshadeynta
Aqoonsiga Shirkadu Yanolja waa saldhigga macluumaadka safarka ee 'Seoul' oo saldhig u ah Seoul oo macnaheedu yahay "Hey, Aan ciyaarno" luuqadda Kuuriyada. Tilmaame-hayaha waxaa loo qaabeeyey font-sanif si loo muujiyo ficil fudud, wax ku ool ah. Adigoo adeegsanaya xarfaha waaweeyn waxay u horseedi kartaa muuqaal jilicsan oo muuqaal ah marka la barbardhigo codsashada sare ee geesiga ah. Booska u dhexeeya xarfaha kasta waa dib loo eegay si looga fogaado in la ildheeraado iftiinka indhaha waxayna kordhisay feejignaanta xitaa cabirka yar ee summadaha. Waxaan si taxaddar leh u soo xulnay midabbo cad oo dhalaalaya oo isu-geyn isugeyn ah si aan u gaarsiino sawirro aad u xiiso badan oo soosaara.
Magaca mashruuca : Yanolja, Magaca naqshadeeyayaasha : Kiwon Lee, Magaca macmiilka : Yanolja.
Aqoonsiga Shirkadu Kiwon Lee Yanolja